Wholesale Kushongedza chakra kunonhuwirira kwesoy kenduru nemakristasi mune stock fekitori uye vagadziri | Winby
Yakashongedzwa chakra inonhuhwirira makenduru e soya nemakristani arimo
Yakakwira-Yemhando Yemasikirwo Soy Crystal Kenduru ine 200 magiramu e100% epamusoro mhando yakasikwa soya wakisi, kupora yekristaro chakra dombo, yakachena yakakosha mafuta, sage shizha, 100% donje kenduru wick, unopisa unosvika makumi mana maawa. Iyo inogona kupa inozorodza uye yakasununguka nharaunda.
Makenduru eCrystal anopa kuchenesa kukuru uye kushushikana mupfungwa, zvinokuchengetedza kudzikama.
Tine ino girazi kenduru zvirongo zviripo, kana iwe uchida kenduru iyi, tinogona kuitumira chaizvo nekukurumidza, kuti ugone kugamuchira zvinhu zvako munguva shoma.
Kukura: D8.6cm * H10.3cm
Crystal marble Soy Wax Aromatherapy Maketi Maketi mune yakasarudzika yakajeka girazi mudziyo
Kwete chete iyo yakakwana yekuchenesa imba yako uye nekupa mweya mutsva, asiwo yezvipo zvemuchato, mapato, kudya kwemanheru uye chipo cheKisimusi, kushongedzwa kweKisimusi. Zvakare yakanaka kune iyo yoga uye aromatherapy.
Ongorora: Usambofa wakasiya kenduru rinotsva risina kutarisirwa. Zvichengetedze pasingasviki nevana uye mhuka dzinovaraidza. Usapise makenduru pane kana padyo nechero chinhu chingabatira moto. Inogona chete kuiswa pane isina kupisa, isina moto. Dzivisa kushandisa nzvimbo dzinotonhora dzakadai segirazi kana machena.
Kunhuwirira uye kurongedza zvese zvinogona kuve zvakagadzirwa !!!
Basa rekuenzanisira rinogona kupihwa.
Soy Wax + Frosted kenduru chirongo + Cotton wick + Bamboo muvharo
Tsika sezvinodiwa nevatengi
Kubva kuCPL & Symrise. 2%, 3%, 5%, 10% inogona kusarudzwa
Kushongedza mumba, yoga, mitambo, hotera, muchato, pati, spa uye kukwiza muviri.
Kurumidza kuendesa / Tsika / ODM OEM / sampuro
3000pcs. Zvidiki zvidiki zvinogona kugamuchirwa kana isu tine stock.
Pashure: Anotakurika Anonhuhwirira Tin Chipo Makenduru ane echisikigo soya wakisi
Zvadaro: Imba Yekushongedza Natural Inonhuhwirira soya Wax Cube Inonyungudza tarts
Organic hemp wick yakaputirwa mukisi
Yakasarudzika logo tsika yekushongedza kenduru
nhema isina girazi kenduru mudziyo
Parafini wakisi aromatherapy mini makenduru
Ceramics jar yekushongedza art kenduru